Mikel Arteta oo ka hadlay Guusha Arsenal ay ka gaartay Kooxda Liecester City
Home Horyaalka Ingiriiska Mikel Arteta oo ka hadlay Guusha Arsenal ay ka gaartay Kooxda Liecester...
Mikel Arteta ayaa rumeysan in Arsenal ay ugu dambeyntii u dhaqaaqeyso dhanka saxda ah ka dib guul soo laabasho cajiib ah oo ay 3-1 ka gaareen Leicester.
David Luiz iyo Nicolas Pepe halka gool rigooro ah uu ku darsaday Alexandre Lacazette ciyaar ka dhacday Garoonka King Power Stadium.
Waxay sidoo kale aheyd guushii ugu horeysay ee Arsenal ay ka gaarto koox ka mid ah seddexda ugu sareysa Premier League tan iyo 2015.
“Kooxda si cad ayey u hormareysaa, waxay qaadaysaa jihada aan jeclahay. Waxay ku saabsan tahay joogteyn,” ayuu yiri Arteta, kaasoo awooday inuu nasiyo Bukayo Saka isla markaana keydka ku sii hayo Pierre-Emerick Aubameyang illaa lixda daqiiqo ee ugu dambeysa.
Previous articleChelsea iyo Manchester United oo Bar-bar dhac ku kala baxay iyo Tottenham oo guul gaartay: Natiijooyinka Kulamada Premier league
Next articleLiverpool oo guul ka gaartay Kooxda Sheffield United: guulaha Reds oo dib u soo laabtay